admin – Page3– Wun Yan
လာသမျှ သူတွေကို အနှောက်အယှက် ပြုနေတဲ့ ကျုံးဘေးက အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်
ယခု သတင်းကို ( Kai Ra ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် တင်ရမလား မတင်ရမလား အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားပြီးမှ တင်ပါတယ်… လူပုံတွေ မဖျက်ဘူးဆိုတာလဲ ရှောင်လို့ရအောင် သိအောင် တမင်မဖျက်ဘဲ တင်ပေးတာပါ…. ပုံပါ အမျိုးသမီး တစ်စုက ကျုံးဘေးစိတ်အပန်းဖြေပြည်သူများကို အရမ်းအနှောက်ယှက်ပြုနေပါတယ်ရှင့် ဆိုင်ကယ်နဲ့လာပါတယ် လူများတဲ့နေရာထိုးရပ်ပြီး ပထမတော့ နေကြာစေ့နဲ့…
ပုရစ်ကြော် ၁၀ ကောင်လောက်စားပြီး နာရီဝက်အတွင်း ယားပြီး နီရဲလာတာနဲ့ ဆက်မစားရဲတော့ဘူး။ စားပွဲပေါ်က ပုရစ်ကြော်ဘူးကို ညကျ ပုရွက်ဆိတ်တက်လာတယ်။ နောက်နေ့ သေနေတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်အပုံသာ ကြည့်တော့။ ဘယ်လောက် ပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးပြီး ဖမ်းထားလဲ မသိဘူး။ လူစားရမဲ့ ပုရစ်ကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးပြီး ဖမ်းသတ်တယ်ဆိုတော့ ပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ လူလည်း အခုထိလည်း နေလို့မကောင်းဘူး PS. ပုရစ်ကြော်က ကြိုက်လို့စားနေကြပါ။ Allergy…
ဂေါ်ဖီထုပ်တောင်သူများကို ကူညီပံ့ပိုးခြင်း ကျွန်မဖေဖေ ဦးအောင်ကိုဝင်းက ဝယ်ယူမယ့်သူမရှိလို့ ဖျက်ဆီးရတော့မယ် ဂေါ်ဖီထုပ် (၅) သိန်းကျော်ကို ဂေါ်ဖီထုပ်တောင်သူများတွေအား ကူညီဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကုန်တင်ကားကြီးများနဲ့ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းနေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ပအိုဝ့်၊ တောင်ရိုးနှင့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်ရေ (၅) သိန်းလောက် ရှိမယ်လို့ ခန်မှန်းတာကြောင့် ဖေဖေက ဝယ်ယူပြီး နိုင်ငံအနှံအပြားက အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ ပခုက္ကူ၊…
ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် အများသိအောင် Share ပေးကြပါ လုပ်စားဂိုဏ်းများ အကြောင်း သိစေရန်။ အရင်ကတည်းက လူနဲနဲပြတ်ပြီး ကားနဲနဲရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ဒီလိုလူတွေ ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး လုပ်စားနေကြပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလ မှာနေ့လည်ပိုင်းတောင် လူရောကားပါ ရှင်းတဲ့နေရာ တော်တော်များလာတော့ ဒီလိုလုပ်စားဂိုဏ်းတွေအတွက် ခွင်ပိုကောင်းလာတယ် ဆိုရပါမယ်။ ကျနော်က ဗဟန်းမှာနေသာပါ။ မေ … ရက်နေ့က အိမ်အပြန် မှန်းခြေ နေ့လယ်ပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရွှေဂုံတိုင်…
ယခု သတင်းကို ( ကိုအေးမင်း ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကျွန်းဖိုပင်ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကံတင်+ ဒေါ်ဝင်းရီ၊ သားကိုဆန်း+မမြမြသင်း၊ ကိုထွန်း+မသီတာစန်း မိသားစုမှ ကျွန်းဖိုပင်ရွာရှိ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို တစ်အိမ်လျှင်ဆန် တစ်တင်းစီ လှူဒါန်းပါသည် (5-5-2020)။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးရဲ့ အခုလို…
ယခု သတင်းကို ( CaptHtay Myint ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေပါရမီ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက မှ ဦးဆောင်သော ရွှေပါရမီကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း မှ Covid -19 ဆေး စစ် စက် သိန်း ၄၀၀တန် စက် ၂ လုံးအား ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ မှာယူပြီး…
Mask တပ်ဖို့ ပြောတာ ရန်အတွေ့ခံရတာ ရှိသလို အိမ်မှာရှိတယ် မေ့လာလို့ဆိုပြီးလဲ ရန်အတွေ့ခံရတယ် Mask တပ်ဆို အိတ်ထဲ လက်နှိုက်သလို လုပ်ပြီး ဆိုင်ကယ် မောင်းပြေးတဲ့ လူလဲရှိတယ်။ ပြောရင်အပေါက်ဆိုးတယ် ဖြစ်ကျမယ်။ Maskမတပ်ရင် မ၀င်ပါနဲ့ ပြောရင် ဘုကြည့်ကြည့်လဲ ခံရတယ်။ မင်းတို့နဲ့ တွေ့မယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးလဲ ခံရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သေမှာဆိုးလို့ ပြောနေရတာကို။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မသေချင်ရင်…
မြင်ရ တွေ့ရတာတွေ စိတ်ပျက်မိတယ် ကူညီမှုတွေ လက်လျှော့ ရတော့မလား တကယ်ဆို စျေးတွေ၊ ဘဏ်တွေက မူလအချိန်အတိုင်းဖွင့်ထားရမှာပါ။ ခုတော့ စျေးဖွင့်ချိန်တွေလျှော့ချတော့ စျေးဖွင့်တာနဲ့ လူပြုံတိုး၊ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်တွေလျှော့ချတော့ ဘဏ်ဖွင့်တာနဲ့ လူပြုံတိုးနေကြတာပါပဲ။ အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပဲ။ အမိန့်တွေထုတ်ပြီးရင် ပြန်လှည့်မကြည့်ကြတာ ဆိုးလွန်းတယ်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေအတွက်က ပလိုင်းပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလိုပါပဲ။ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ဖြစ်လာရင် အားလုံးသေဖို့သာ ပြင်ထားကြပါတော့။…
Covid-19 ရောဂါ အတွက် Remdesivir ဆေးကို အရေးပေါ် ကုသဆေး အဖြစ် အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြု ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) Remdesivir ဆေးကို Covid-19 ရောဂါ ပြင်းထန်သူတွေကို ကုသဖို့အတွက် အမေရိကန် FDAက ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏအလွန်အမင်း နည်းပါးတဲ့ Covid-19 ရောဂါသည် ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှူစက်လိုအပ်နိုင်တဲ့ Covid-19 ရောဂါသည်တွေမှာ သုံးနိုင်တယ်လို့…
အလုပ်ရှင်မှ ကွမ်းသီးပွဲရုံ အလုပ်သမတွေကို ထီဖိုးငွေ စိုက်ထားပေးပြီး အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်စနစ်ဖြင့် ထီထိုးပေးရာမှ သိန်း (၁၀၀) ဆုပေါက် သိန်း(၁၀၀)ဆု ကံထူးရှင်ကတော့ မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းမှ မစန်းစန်းနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံကတော့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ်မှ ဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲရုံအလုပ်သမလေးတွေက ထီတစောင်(၁၀၀၀) ပေးထိုးဖို့ တော်တော် စဉ်းစားရတဲ့ အခြေအနေပါ။…